Waa’ee keenya - Oromia Media Network
Oromiyaa Miidiyaa Neetwork (OMN) dhaabbata oduu dhuunfaa, kan bu’aaf hin hojjennee fi garee kamiifuu hin loogne yoo tahu, Itoophiyaa keessatti naannoo guddichaa fi ummata heddu qabu kan tahe dhimma Oromiyaa irratti gabaasa oduu lammiilee giddu gala godhate dhiheessa. OMN odeessa dhahannaa onnee ummataa dhaggeeffatu, haala qabatamaa ummanni baruu barbaadu fi dhimmoota naannichaa kan xiyyeeffannoo gahaa waakkataman qotee baasuun uwwisa kennaaf. Kaayyoon keenya giddu gala oduu aaf-danuu kan itti fufiinsa qabuu fi akka madda oduu qabatamaatti tajaajilu uumuudhaan, waa’ee ummata Oromoo, bulchiinsa Itoophiyaa fi Gaanfa Afriikaa irratti odeessa barbaachisaa dabarsuu dha.
Sadarkaa gaazexessummaa ol’aanaa irratti argamuun ofirratti amantaadhaan dhimmoota Oromoo laallatan faana dhoofnee xiyyeeffannoo kennina. Ummata keenya diaspora lakkoofsaan dabalaa deemaa jiru maloota dijitaalaa fi sirna gabaasaa ummata giddu gala godhate fayyadamuun hundee biyya isaatiin walitti hidhuuf hojjenna. Qulqullina eeguun qabiyyeen miidiyaa keenyaa maloota salphaatti faayidaa kennan kan akka marsariitii, mobaayiloota, miidiyaa hawaasummaa, televiziyoona satelaayitii fi raadiyoo irratti akka argaman goona.
Mootummaan Itiyoophiyaa yookiin kanneen paartii biyya bulchutti dhihoo tahan, gaazeexaalee, raadiyoo fi TV biyyattii keessa jiran hundumaa dhuunfatu yookiis toyatu. Mootummaan Itoophiyaa mirgoota of ibsuu fi dubbachuu ukkaamsuu itti fufee jira. Maxxansoota dhunfaa Afaan Oromoon bahani fi kanneen dhimmoota ummata Oromoof xiyyeeffannoo kennan hunda cufee jira. Kana irraa ka’uunis, Afaan Oromoo afaan seerawaa mootummaa naannoo Oromiyaa tahullee, gaazexaan dhunfaa afaan kanaan maxxanfamtu takkallee hin jirtu. Akkasumas afaanota Afriikaa keessatti bal’inaan dubbataman keessaa tokko kan tahe Afaan ummanni miliyoona 40 ol tahe dubbatu kanaan kan tamsaasan raadiyoos tahee televizyiinni dhuunfaa tokkollee hin jirani.
Itoophiyaan falammii hundee qabeessaa fi mormii bifa kamiiyyuu yakkuudhaan beekamti. Gaazeexaaleen dhunfaan biyya keessaa akka of gulaalaniif dhiibbaa ulfaataatu irra kaayama. Marsariitiilee daayaasporaa maadheffatan hanqina kana guutuuf jecha mirgoonni bilisaan yaada ibsachuu biyyattii keessatti akka eegamaniif lallabuuf dirqaman. Haa tahu malee, marsariitiileen oduu kun dhimmoota qabatamoo lafarra jiran gabaasuu irratti hanqina mataa isaanii ni qabaatu. Dhimma miidiyaa irratti ammoo Oromoo fi saboonni biyyattii biroon filannoo ulfaatoo lama qabu. Kunis tokko, miidiyaalee mootummaan toyatu kan olola paartii biyya bulchuu faarsuuf hojjetanii yoo tahu, kaan ammoo miidiyaalee faallaa kanaan sagalee mormitoota mootummaa tahuun dubbatanii ti. Kanneen lamaan keessaa filachuuf dirqamu.
Kanaafuu, miidiyaan ofirratti hirkataa fi of duratti xiyyeeffatu marii dhama qabuu haala walii galaa hammatu fedhii ummataa irratti hundaawee geggeessuuf tarkaanfachuu qaba. Bu’uruma kanaanis, OMN, oduulee siyaasaa fi waa’ee jiruu ilma namaa gama daldalaa, barnootaa, siyaasaa, imalaa, saayinsii, teknooloojii, naannoo, sportii, aartii fi aadaa kamuu kallattii hundumaan dhiheessuuf hojjeta.
Sirna gabaasaa dhugaa irratti hundaawee fi qulqullina qabuun OMN hanqinoota jiran guutuuf hawaasa walitti dhiheessuun, mariisisuun karaa mirgoota pireesii, mirgoota namoomaa, dimokraasii, fayyaa hawaasaa, maatii fi nageenya daa’immanii eeguuf hojjeta.
AKKA ITTI TINDHIFAMU
Qulqullinni gaazexessummaa ol’aanaan kan ummataaf barbaachisu yoo tahu, bu’uura mirga namoomaa fi utubaa hawaasa bilisaa fi dimokraatawaa ti jenner amanna. OMN kan tindhifamu gumaacha fedhii irratti hundaawe, karaa beeksisii fi gumaacha dabalataan godhamuufiin akka tahu hawwina. Warra miidiyaa ummata tajaajilu tumsan hundaa akka miidiyaa kana gargaaranii fi itti fufsiisan afeerraan.
OMN Ameerikaa keessa kan maadheffatee fi bu’aaf kan hin hojjenne dhaabbata 501(c)(3) kan Komishinii Wal qunnamtii Federaalaa biyyattii jalatti hayyama qabuu dha. OMN kan bulu Boordii ol’aanaa, Kaawunsilii Hoji-raaw’achiiftuu fi garee gulaalaa gaazexessoota ogummaa qabaniini.
Odeessa dabalataaf imeelii keenya info@oromiamedia.org irratti yookiis telefoona keenya 612-294-6770 irratti nu qunnamuu dandeessani.